Fikarohana momba ny firaisana Porofon'ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao-Fahatakarana ny fiainana taloha - Fikarohana momba ny vatana teraka
Article amin'ny Walter Semkiw, MD avy amin'ny ateraka indray ary Fiverenan'ny revolisionera
Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo. Azafady avereno jerena Ny fanambarana ho an'ny Misiônan'ny fiaraha-monina Reincarnation.
Jereo koa: Fandrosoana amin'ny Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana: Fanajana an'i Ian Stevenson, MD
Avy amin'ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray, izay mitambatra manome porofon'ny vatana vaovao sy fiainana aorian'ny fahafatesany, ireto manaraka ireto dia voamarina:
Ny haavon'ny endrika, ny endrika sy ny tarehimarika amin'ny tarehy, dia mety mifanaraka amin'ny fiainana mandra-pahafatiny. Ho an'ny lehilahy, ny volom-borona, toy ny bera sy ny fikorian-davenona, dia azo zakaina avy amin'ny fampidirana iray hafa. Ny fahazarana ara-batana, toy ny fihetsika sy ny fihetsika tanana, dia mety tsy hifanaraka amin'ny fiainana mandra-pahafaty.
Ian Stevenson, MD, izay maty tamin'ny 2007, dia mpitsabo aretin-tsaina tao amin'ny University of Virginia. Nandritra ny asany, Dr. Stevenson dia nanangona sy nandinika tranga manodidina ny 2500 nahatafiditra ankizy izay nahatadidy tampoka ny fiainana taloha tamin'ny antsipiriany. Dr. Stevenson dia nandeha nankany amin'ny sehatry ny fiainana taloha sy taloha ny zaza mba hanao dinidinika amin'ireo vavolombelona hijerena ireo antsipiriany voalaza ao amin'ireo kaonty taloha. Amin'ny 1500 eo ho eo amin'ireo tranga ireo dia azo hamarinina ny zava-misy taloha.
Ny tranga roa manan-danja Ian Stevenson izay nianatra nandritra ny fe-potoana mihoatra ny 20 taona, izay mampiseho fa ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endrik'izy ireo dia mety mitovitovy amin'izany Suzanne Ghanem ary Daniel Jurdi.
Ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny fiainana dia hita ihany koa amin'ny tranga Ian Stevenson hafa, ary koa amin'ny tranga maro tsy miankina amin'ny fikambanan'ny zaza vao teraka
Ohatra, ny raharaha momba ny fanambadiana virijiny ao James Huston, Jr. | James Leininger, Ary koa ny John B. Gordon Jeff Keene ny tranga indray ny vatana, dia mampiseho amin'ny fomba mampihetsi-po ihany koa ny fomba mety hitazona endrika amin'ny endriky ny endriky ny endrika.
Ny karazana vatana dia mety tsy miovaova mandritra ny androm-piainany, na dia mety hiova aza ny habeny. Ny olona iray dia mety ho fohy mandritra ny androm-piainana iray manontolo ary lava amin'ny manaraka. Ny olona iray dia afaka matavy loatra amin'ny fampodiana iray, saingy nisafidy ny hihazona lanjany bebe kokoa amin'ny hafa.
Ny maodely momba ny angovo na ny Hologram
Ahoana no ahafahan'ny endrika ivelany mitovitovy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa? Tsy fantatra ny valin'io fanontaniana io, fa izaho kosa mihevitra fa ny fanahy dia manomana tetikasa angovo na hologram ao amin'ny foibem-pambolena izay miovaova manodidina.
Ny fitsipika dia mitovy amin'ny fomba iantsoana mpitsabo arifomba mampiasa ny herinaratra elektrika mba hanamboarana taolana amin'ny ratra mafy. Ity môdarka angovo ity dia tsy manampy fotsiny amin'ny famoronana endrika ivelany, fa azo ampiasaina koa mba hampidirana ny fampahalalana sy ny talenta ao amin'ny vatana sy ny saina hivoatra, izay afaka manazava ny fahazoana ankizy.
Ny génétika dia mandray anjara ary hita fa ny fifandraisan'ny môdelin'ny angovo fanahy sy ny lova lova dia miteraka fisehoan'ny olona iray. Ny olona iray tonga amin'ny firazanana hafa dia hanana endrika ara-batana izay mifanaraka amin'izany hazakazaka izany, na dia ny ampahany amin'ny tarehy aza, ny firafitry ny taolana, dia hitazona hatrany hatrany amin'ny fahatongavan'ny nofo iray hafa. Ny fitoviana amin'ny fianakaviana dia mitranga koa noho ny génétika. Raha fintinina, ny môdely angovo an'ny fanahy dia mifandray amin'ny antony ara-pirazanana sy ara-pirazanana mba hamoronana endrika ivelany.
Fanahy na sary Ghost
Porofo iray manohana ny fisian'ny vatana angovo izay mitovy amin'ny vatan'ny vatana sarin'ny vatana ara-panahy hita maso tratra teo ambonin'ny fiara iray tafiditra tamin'ny loza tsy nampoizina. Eto amin'ity sary ity ny endriky ny vatan'ny fanahy dia mitovy amin'ny tarehin'ilay zatovo maty ao anaty fiara.
Ankoatra izany, ny endriky ny vatan'ny fanahy dia tratra ao anaty fisehosehoana be dia be amin'ny vavany misokatra malalaka, izay tsy ho vita ny hitazonana ny faty, toy ny tovolahy efa nodimandry ao anaty fiara dia nidona teo anoloan'ny sehatry ny mpandeha. Ankoatr'izany dia toa misy lafiny iray ho an'ny hetsiky ny tarehimarika tratra tao amin'ny sary. Ny endrika miavaka sy endrika amin'ny lafiny fihetsika dia manohitra ny sary izay vokatry ny fisehoana indroa na ny tsy fahombiazan'ny fakantsary.
Ny fisian'ny hery na vatan'ny fanahy izay miseho amin'ny endriktsika dia manohana ihany koa ny fandinihana natao teo amin'ny sahan'ny Fifandraisana mifandraika amin'ny fifandraisana, izay misy ifandraisany amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny fitaovana elektronika, televiziona, telefaona, sns.
Rehefa mivezivezy sary avy amin'ny tontolon'ny fanahy ireo fanahy dia voamarik'izy ireo ireo vatan'ny fanahy izay mitovy amin'ny vatany rehefa velona izy ireo.
Reincarnation, endrika ivelany & hatsarana
Mikasika ny resaka hatsarana dia hita fa ny firafitry ny tarehy manokana dia azo heverina ho tsara tarehy na tsara tarehy. Ny fahitana ny hatsaran-tarehy dia miankina betsaka amin'ny anton-javatra toy ny endrika sy ny vatana. Ohatra, ny vehivavy iray amin'ny nofo nofo iray dia mety ho lava, mahia, manana hoditra mahafinaritra, tsiky tonga lafatra ary vatana tononkira. Noho ireo antony ireo sy ny vokany eo amin'ny endriny, ity vehivavy ity dia mety ho lasa maodely lamaody na mpanjakavavin'ny hatsaran-tarehy. Amin'ny fahatongavan'ny nofo nofo iray hafa, io vehivavy io ihany, izay mitovy endrika amin'ny endrika tarehy, dia mety ho teraka amin'ny endrika masiaka, vatana mafy sy nify miolakolaka. Ity vehivavy ity dia heverina ho fisehoana mahazatra, ataon'ny mpanara-baovao.
Ny teboka dia hoe ny endrika firafitry ny endriky ny tarehy dia mety ho hita ho tsara tarehy na tsy azo atokisana, mifototra amin'ireo fari-pahalalana ireo. Mino aho fa afaka manova ny maha-manintona sy mahazatra antsika, hatramin'ny fiainana mandra-pahavelomantsika, miorina amin'ny lesona tokony hianarantsika amin'ny fampodiana manokana.
Fanovana ny finoana, ny maha-firenena, ny firazanana, ny fiaraha-monina ety anaty tany ary ny zaza ao amin'ny vatana vaovao
Ny fandinihana lehibe izay natao tamin'ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana dia ny fahafahan'ny olona manova fivavahana, zom-pirenena, foko, firazanana sy lahy ary vavy samy hafa. Ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy. Ny iray amin'ireo tranga mahery vaika momba ny fanambadiana vao teraka dia mampiseho ny fiovan'ny finoana, ny zom-pirenena ary ny firazanana ara-poko avy amin'ny fampodiana amin'ny iray hafa: Anne Frank | Barbro Karlen raharaha momba ny fanambadiana zokiolona.
Nenjehina i Anne Frank ary maty tany amin'ny toby fitanana fony Jiosy, raha teraka tamin'ny fianakaviana Kristiana tany Soeda i Barbro. Raha fantatry ny Nazia fa afaka ny ho teraka Jiosy mandritra ny androm-piainana iray sy kristianina amin'ny iray hafa, dia ny Famonoana Tambabe tsy ho nisy mihitsy.
Toy izany koa, rehefa mahatsapa ireo Israeliana jiosy fa afaka ny hiverina indray amin'ny maha Palestiniana Miozolomana azy ireo sy ny mifamadika amin'izany izy ireo, dia afaka miverina indray amin'ny maha-Katôlika azy ny Protestanta, ary ny Shiita dia mahafantatra fa afaka hiverina amin'ny maha Sunnis izy ireo, avy eo dia hampihena ny herisetra sy ny fampihorohoroana mifototra amin'ireo fiaraha-monina samihafa ireo.
Fanovana ny miralenta amin'ny tranga fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao miaraka amin'ny fijerena ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, ny lesbiana, ny transsexualisme, ny transgenderism ary ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy
Fanampin'izany, ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana dia mampiseho fa eo amin'ny 10 isan-jato eo ho eo ny tranga, ny fanahy dia manova ny lahy. Ity percentage ity dia notaterin'i Ian Stevenson, MD, tao amin'ny andiam-pandrosoana 1200 izay nahatonga ny ankizy haka sary an-tsaina ny fahatsiarovana azy.
Ity fandinihana ity dia afaka manome antsika ny fahitana ny antony mahatonga ny olona sasany ho samy lahy na samy vavy na manana olana momba ny maha-lahy sy vavy. Araka ny nomarihina, ny fikarohana momba ny vovoka indray vao haingana nataon'i Ian Stevenson dia mampiseho fa ny fiovan'ny fanahy dia miovaova ny 10 isan-jaton'ny tranga. Raha toa ny fanahy iray efa zatra amin'ny fampidirana firaisana ara-nofo iray ary avy eo dia manana ny fiainana amin'ny maha-lahy na vavy azy, dia mety mbola mifantoka amin'ny lahy sy vavy mahazatra ny fanahy. Mety miteraka homosexuel izany, transsexualism, pifidianana ary maha-lahy sy ny vavy aretina.
Ny raharaha manan-danja Ian Stevenson izay naneho ny fiovan'ny maha-lahy na maha-vavy na ny olana momba ny maha-lahy sy vavy dia:
Lehilahy japoney lahy iray dia lasa fitaovam-piovan'ny vehivavy ary lasa lesbienne
Chuey, zazalahy iray, maty an-drano ary teraka indray ao amin'ny zazavavy, fa mitazona ny toetran'ny lehilahy
Na dia eo aza ireo fiovana ireo, ny fiovan'ny endrika dia mbola mitoetra hatrany, araka ny naseho tao amin'ny Louise Vanderbilt | Wayne Peterson ary Charles Parkhurst | Penney Peirce pinoana.
Raha fintinina, ny ankamaroan'ny olona dia mitazona ny miralenta mitovy amin'ny vanim-potoana iray hafa. Araka izany dia toa manana toetra maha-lahy na maha-vavy voajanahary ny fanahin'ny olona iray. Ireo izay masculine voajanahary dia miha-teraka indray amin'ny maha-lehilahy azy. Ireo izay vehivavy voajanahary dia aleony miverina amin'ny vatana vehivavy. Isika rehetra dia mivadika isaky ny vanim-potoana ny lahy sy ny vavy, hianarantsika hoe manao ahoana ny maha-lahy sy maha-vavy hafa. Na dia tsy mitranga foana aza izany, raha manova ny lahy sy ny vavy ny fanahy iray, dia mety hitranga ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, toy ny transsexualism.
Ny tranga farany niainana tamin'ny fomba hafa, tamin'ny alàlan'ny asako miaraka amin'i Kevin Ryerson, izay mampiseho ny fiovana eo amin'ny lahy sy vavy dia mety miteraka adihevitra momba ny maha-lahy sy vavy: ny Babe Didrikson Zaharias | Bruce / Caitlyn Jenner
Reincarnation & Toetra maha-olona
Ny endriky ny toetran'ny olona dia toa mitoetra tsy tapaka mandritra ny androm-piainany. Ny fomba iray hanatonana ny fiainana sy ny fomba hitan'ny hafa anao dia mitoetra ho tsy miova. Ny toetra mampiavaka ny toetrantsika dia tsara ary mitondra azy ireo miaraka amintsika mba hahasoa antsika. Ny toetran'ny olona hafa dia mety hanimba ary mety hiteraka fijaliana mandritra ny androm-piainany. Miseho fa ny ampahany amin'ny evolisiona dia ny manala ny tebiteby ao amin'ny toetrantsika.
Ohatra, eritrereto ny olona iray izay tena mahery vaika. Ny tombony amin'ny hoe mahery setra dia ny manatanteraka tanjona. Ny endrika manimba dia mety ho tratran'ny herisetra ny olon-kafa. Ny tanjon'ny olona mahery setra mandritra ny fotoana iray na mihoatra iray dia ny handinihana ny fahatsapan'ny hafa.
Tantaran'ny Reincarnation & Scars avy amin'ny fiainana taloha
Ian Stevenson dia nandeha lava be mba hianatra momba ny fahaterahana sy ny fahaterahana amin'ny fahaterahana izay toa mifandraika amin'ny ratram-panafody tamin'ny vanim-potoana vao niova. Ohatra, raha nisy olona iray maty tamin'ny bala iray na ny antsy nanafosafo tamin'ny fahazazana, dia nanamarika i Stevenson fa hiseho amin'ny toerana iray eo amin'ny vatany ny marika na ny marariny eo amin'ny fiainany aorian'izany. Nanangona tranga toy izany izy tao anatin 'ilay asa lehibe roa be dia be nataony, Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny biolojia: Contribution to the etiology of birthmarks and birth defects.
Azontsika atao ny mampiasa ny foto-kevitsika momba ny tempolin'ny angovo izay manome lanja ny vatan'ny vatana mba hahatakarana ny fomba fiasan'ny marika momba ny fiterahana taloha. Toa hita fa mety ho voan'ny traumatique ara-batana io modely angovo io. Ny fisiahana an-tsehatra amin'ny vatan'ny angovo dia avy eo amin'ny fiterahana indray eo amin'ny vatana.
Reincarnation dia manazava ireo mpamokatra ankizy sy talenta an-trano
Amin'ny lafiny ara-panahy sy ara-tsaina, toa misintona ny toerana nialantsika isika. Ny fahombiazantsika amin'ny asa aman-draharaha ara-panahy, ara-tsaina ary ara-javakanto dia voatazona - anisany amintsika izany. Noho izany, ny ezaka amin'ny fandrosoana ny tenantsika dia tsy ho very na oviana na oviana rehefa manorina ny ezaka ataontsika mandra-pahavelomantsika. Ny zaza amam-behivavy dia afaka hazavaina amin'ny alalan'ny firaisana indray ao amin'ny vatana vaovao, satria ny fanahy dia toa afaka mamaky vaovao sy talenta ao amin'ny vatana sy saina.
Ohatra iray amin'ny hoe ny talenta sy ny hevitra dia azo alaina avy amin'ny fanahy dia midika hoe ny Paul Gauguin | Fijangajangana zaza vao teraka i Peter Teekamp, tahaka ny namerenan'i Petera mari-pamantarana nosoratan'i Gauguin tamin'ny lasa teo aloha. Ny tranga vao teraka indray John Elliotson | Norm Shealy dia manaporofo fa ny talenta toy ny dokotera dia azo entina amin'ny fampidirana iray hafa.
Na dia afaka manomboka amin'ny fiainana iray manontolo aza ny talenta, raha ny mifanohitra amin'izany, raha toa ka mila làlana hafa amin'ny fiainana manokana ny fanahy, dia mety ho voasakana ny talenta.
Na dia toa manana haavon'ny fahamatorana ara-panahy sy fandrosoana ara-pahalalana mandritra ny androm-piainana aza isika, dia afaka mivarotra ny mahantra sy manan-karena, malaza ary tsy fantatra. Mifandimby izahay rehefa apetraka ao anaty sy ivelan'ny masony. Ny toerana misy antsika eo amin'ny fiainana dia toa voafaritry ny karma noforonintsika teo amin'ny fiainana taloha, ary koa amin'ny lesona napetraky ny fanahintsika ho antsika. Na eo aza izany, misy ny lamina iverenan'ny fanahy mahery ho fanahy mahery, ny mpanakanto lehibe miverina ho mpanakanto mahafinaritra ary ireo izay nisy fiatraikany teo aloha dia manao izany indray amin'ny fiainana manaraka.
Reincarnation & Writing, Fomba fifandraisana sy feo
Tahaka ny toetra mampiavaka ny toetran'ny olona dia tsy miovaova hatrany amin'ny fiainana mandra-pahafatiny, ny fomba fitenin'ny olona iray dia mitovy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa. Raha toa ka John B. Gordon Jeff Keene, fanadihadiana ara-pitsipi-pitenenana nataon'ny University of California, Berkeley, profesora dia naneho fa ny firafitry ny fanoratana dia afaka mitoetra toy ny iray ihany amin'ny fomba iray hafa.
Ny fanovana sasany amin'ny fomba fanoratana, mazava ho azy, dia ho hita fa noho ny fomba amam-panao samihafa. Na izany aza, dia mifanaraka amin'ny fombafomba fanehoan-kevitra sy ny votoatiny. Tahaka ny portraits no ahafahantsika mahita ny fomba fijery iray mety mitovy amin'ny fiainana mandra-pahafaty, ireo tahirin-kevitra ara-tantara, diary ary ireo tahirin-kevitra hafa dia mamela antsika handalina ny fomba fanoratana amin'ny endriny vaovao.
Ho mahaliana ny mahita raha misy kalitaon'ny feo tsy mifanaraka amin'ny fampidirana iray hafa. Ho an'i Rosetta Pampanini | Charity Sunshine, ny fihirana opera dia fiantsoana amin'ny androm-piainany. Misy rakibolana izay ahafahantsika mampitaha ny feo sy ny fomba fihirana avy amin'ny fampidirana iray mankany amin'ny iray hafa.
Xenoglossy: Fiteny tsy voatsara sy fitehirizana ny toetra ao anaty fanahy
Ao amin'ireo fehintsoratra teo aloha, dia voalaza fa ny singa amin'ny toetrany, toy ny toetoetran'ny toetra, ny lamaody sy ny talenta fanoratana fiteny dia azo entina mandritra ny androm-piainan'ny iray hafa. Ny ohatra faratampony dia miteraka tranga xenoglossy, izay ahitana ny endriky ny fiainana taloha izay miseho amin'ny endriky ny vanim-potoana ankehitriny.
Xenoglossy dia fahaizana hahatakatra ny fiteny vahiny izay tsy nianatra nandritra ny androm-piainany amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanarenana ny fiteny avy amin'ny fiainam-piainana taloha, amin'ny toe-javatra xenoglossy sasany, ny endriky ny fiainana taloha dia miseho ary tena maka ny vatan'ny toetr'olona ankehitriny. Ireo toe-javatra ireo dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka mitazona ny fiainan'ny olona taloha izay tafiditra ao anatiny.
The raharaha xenoglossy an'i Sharada | Uttara Huddar, fikarohana nataon'i Ian Stevenson, MD, dia mampiseho amin'ny endriny ity tranga ity. Ireo tranga toy izany dia ahitana ny raharaha xenoglossy Jensen Jacoby | TE ary Gretchen Gottlieb | Dolores Jay
Fomba iray anehoana ny fomba itehirizana ny toetra ny fahitana ny tenantsika ho toy ny bubble izay kinova kely amin'ny fanahintsika. Rehefa tonga nofo isika, dia miseho avy amin'ny fanahintsika ny vatantsika. Ny baomba ataontsika dia misy ny herin'ny fanahintsika sy ny toetrany. Rehefa vita ny fahatongavantsika ho nofo, ny fanahy dia mamerina mamoaka ilay bubble izay antsika ary mitazona ny vatantsika ao anatiny mandrakizay. Ampahany amin'ny fanahintsika isika, saingy mitazona ny maha-izy antsika dia mivoatra mandritra ny fiainantsika eto an-tany.
ao amin'ny tranga toy ny Sharada | Trangam-pananahana ao Uttara Huddar, ny bala Sharada, izay nitoetra tamin'ny fanahy hatramin'ny nifaranan'ny fahatongavan'izao tontolo izao, dia nivoaka avy tao anaty fanahy mba haneho ny tenany tamin'ny alalan'ny Uttara, bubble fanahy iray izay nanjary nofo.
Fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray, anisan'izany ny maro nataon'i Ian Stevenson, MD tao amin'ny University of Virginia, dia mampiseho fa ny fanahy iray dia mety hanome aina vatana hafa mihoatra ny iray amin'ny fotoana iray. Nantsoiko hoe "fahatongavan'ny nofo nofo" io fisehoan-javatra io. Olona roa mitovy fanahy no resahiko, izay tonga nofo tonga nofo miaraka, "mizara". Andiam-tranga manaitra sy mahasarika izay mampiseho ny fahatongavan'ny nofo nofo ho nofo Penney Peirce. Ireo tranga hafa mahakasika ny fisarahana ara-nofo dia azo averina amin'ny alàlan'ny fanindriana amin'ny sokajin'olona Reincarnation Research, "Fisarahana nofo."
Ahoana no fiasan'ny fahatongavan'ny nofo nofo, fantatra koa amin'ny hoe fiainana mitovy? Na dia tsy fantatsika tsara aza, azontsika atao ny mieritreritra ny fahatongavan'ny nofo ho nofo mitovy amin'ny fomba ahafahan'ny bolan'ny fitaratra mizara hazavam-pahazavana ho tara-pahazavana maro. Toy izany koa, ny fanahy dia afaka mamoaka taratra jiro mihoatra ny iray, na maodely mihoatra ny iray angovo, ho tonga nofo nofo indray mandeha. Azontsika an-tsaina ihany koa ny fisarahana roa ho toy ny sandry roa an'ny olombelona. Ny sandry tsirairay dia samy manana ny fisiany, fa ny sandry roa kosa dia fehezin'ny ati-doha na saina iray. Amin'ny fahatongavana nofo, afaka mahita ny fisarahana isika ho toy ny appendage an'ny fanahy.
Ny fampitahorana bubble ampiasaiko etsy ambony mba hanazavana ny fomba ahafahan'ny fanahy mitazona ny fiainan'ny olona teo aloha dia azo ampiasaina koa mba hahazoana tsaratsara kokoa ny fizarana ny fisarahana. Azontsika eritreretina ny hizara ny fampodiana amin'ny maha-fahaizana ny fanahintsika mba hanehoana bebe kokoa ny sombin-tsolika iray, amin'ny fotoana iray, amin'ny fampidirana ara-nofo.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny vatana vaovao, ny fanahy fanahy ary ny tanjonao na ny planina fiainana
Ny rahavavy birmanina dia miorina amin'ny twins
Ny olona dia miseho an-tsokosoko ao anaty vondrona, mifototra amin'ny karma niparitaka sy ny fihetseham-po mampihetsi-po. Matetika ny mpivady dia miara-miverina ary ny fianakaviana manontolo dia mety hiverina. Rehefa misy olon-kafa miorim-ponenana, dia hisy mpikambana hafa ao amin'io vondrona karmic io. Ohatra, ao amin'ny Ny tranga momba ny vatana vaovao momba ny fanambadiana Penney Peirce voalaza etsy ambony mikasika ny fizarana ny voary vaovao, Ny rahavavin'i Penney tao amin'ny Alice Cary nandritra ny androm-piainany dia teraka indray tamin'ny maha-rahavaviny tamin'ny fiainany ankehitriny. Ny famantarana ny mpikambana ao amin'ny vondrona karmika an'io olona io dia fepetra iray hafa ilaina amin'ny fametrahana lalao taloha.
Ian Stevenson dia nanao fikarohana momba ny kambana tena manan-danja izay niainan'ny tanora 31 taloha (olona 62). Ao amin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ireo kambana ireo dia nanana fifandraisana naharitra teo amin'ny fiainana. Ny karazana fialam-boly mahazatra indrindra teo aloha dia ny an'ny iray tampo aminy, arahin'ny namana, ny fifandraisana amin'ny fianakaviana hafa, avy eo ny maha-mpivady azy amin'ny lasa vao tafaverina.
Ny fifandraisana amin'ny fiainana taloha momba ny zaza roa
Fianakaviana hafa: 19%
Ny fandinihan'i Stevenson kambana dia maneho porofo mafy fa ny fanahy dia mikasa ny androm-piainany mba hiaraka amin'ny olon-tiana amin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao. Tranga roa asongadin'ity fanadihadiana ity dia misy an'io tranga vaovao momba ny fanambadiana indray ny vondron'olon-kibo Burmese, izay mampiseho ny fitoviana ara-batana avy amin'ny fampodiana amin'ny iray hafa. Ny sary mampitaha an'ireo kambana birmanina ireo, izay rahavavy tamin'ny fahaterahany tamin'ny lasa, dia omena etsy ambony. Phyu dia nanjary niova ho San and Saipai reincarnated fony izy kambana, Nyunt.
Ahoana no ahafahantsika mifandray amin'ny vondrona karmika? Ny valiny, arak'izany, dia anjarena. Amin'ny famakafakana ireo tranga niseho taloha, dia voamarika fa isika rehetra dia manana filaharana efa voafaritra mialoha na fiainana misy antsika izay mitondra antsika any amin'ny olona izay heverintsika fa manokana fotoana hiarahana.
Mba hahalalantsika bebe kokoa ny endriky ny asa, andeha hampiasaintsika ny fampitahana ny dia iray. Eritrereto ny fiainanao ho fialan-tsasatra lava tianao alahanao. Manapa-kevitra ianao hoe iza no tadiavinao ary mila jerena, any amin'izay tianao haleha, ary inona no asa tianao hatao.
Mandrindra ny làlan-kalehanao miaraka amin'ireo olona tokony hodiavinao ianao. Ianao, ny namanao karmic, ary ireo olon-tianao dia manaiky ny drafitra alohan'ny hahaterahanao. Rehefa tafiditra ao amin'ny fiainana ianao, ny anjara dia miantoka amin'ny fihaonanao amin'ny vondrona karmic fanahy anao.
Ny fanefitra ho an'ny fiarahamonina karmika dia mety ho fianakaviantsika, miasa fiainana sy fialam-boly. Ireo sehatra ireo dia dingana arotsakay amin'ny lalao karmika amin'ny fiainantsika. Manome hazavana vaovao amin'ny fehezan'i Shakespeare izany, "Ny fiainana manontolo dia dingana fotsiny."
Mihaona amin'ireo vondrona karmika samihafa isika amin'ny sehatra samihafa eo amin'ny fiainana. Rehefa mahazo ny faniriana hanao asa vaovao isika, mandehandeha any amin'ny tanàna vaovao, na miala amin'ny fialam-boly vaovao, dia imbetsaka ny ampahany amin'ny anjarantsika no hivoaka. Ny toerana vaovao dia mitondra antsika any amin'ireo vondrona karmika mila miaraka.
Reincarnation Xenoglossy tranga miaraka amin'ny traikefa nahafatesan'ny maty, ivelan'ny traikefa amin'ny vatana, fijerena lavitra, fahatsiarovan-tena mivelatra, fahatongavan'ny nofo nofo, fanahy ary fikasana fiainana iray ho teraka ao amin'ny fianakaviana iray ihany.
Ny trangam-pinoana tena mahagaga iray notontosain'i Ian Stevenson sy Francis Story dia midika hoe mônika sy tantsaha Thai, izay niaina tamim-pahavitrihana ny fahafatesany sy ny fahaterahany ary nanoratra momba ny autopiographie momba ny tantaram-pirahalavanany tamin'ny maty. Araka ny nomarihina tao amin'ny anaram-boninahitra etsy ambony, ity tranga farany teo ity dia fanehoana ireo fitsipiky ny fiverenan'ny vatana vaovao, izay mamela antsika hahatakatra ny fiainana taloha amin'ny halalin'ny halemem-panahy. Mba hahalalana bebe kokoa:
Mandeha: Xenoglossy, Ny Fanarenana ny Fiainana, Ny Fiainana ny Fahafatesana Ao Amin'ny Trano Firaisam-piterahana Nai Leng | Choate
Reincarnation & Safidy malalaka
Raha marina fa manana drafitrasam-piainana isika dia tsy maintsy manontany isika raha manana safidy malalaka. Toa midika fa na dia samy manana drafitra efa voafaritra mialoha izay natolotray ho fanomezam-boninahitra isika dia manana safidy malalaka amin'ny zavatra ataontsika eny an-dalana. Raha ny marina, ny fandrosoana sy ny evolisiona olombelona dia tsy mety hitranga tsy misy safidy malalaka. Ny olona sasany dia mety manana lalana mitobaka kokoa izay mametra ny fitetezam-paritra samihafa, raha ny hafa kosa mety manana drafitra lalao tsy dia misy rafitra. Na izany na tsy izany, manana safidy malalaka isika amin'ny lalana tiantsika.
Ny vondrona Karmic dia manome fanazavana momba ny zavatra niainan'ny déjà. Raha mifanena amin'ny olona fantatsika teo amin'ny fiainantsika taloha isika, dia tsy mahagaga raha mety hahatsikaritra ny fankasitrahana isika rehefa mihaona. Koa satria ny olona dia manana lamaody amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, dia mety hahatsapa ireo toetra ireo isika ary ny fanehoan-kevitra manokana rehefa mitranga ny toe-javatra. Farany, mety hitranga ny déjà vu raha mahatsikaritra zava-mitranga iray izay ampahany amin'ny diarinay. Mety hahatsikaritra ny marika iray eny an-dalana isika eo amin'ilay lalana efa voafaritra mialoha.
Reincarnation & Fanalan-jaza
Raha azo ekena ny firaisana amin'ny vatana, dia azo jerena amin'ny fomba hafa ny fanalan-jaza, satria ny fikarohana momba ny firaisana dia mampiseho fa misy ny fanahy talohan'ny fahatanorana, fa tsy noforonina tamin'ny fotoana nahaterahana.
Ny fanalan-jaza dia manala fahafahana ho an'ny fanahy iray ho lasa fianakaviana iray manokana, kanefa ny fanahy dia afaka miaraka amin'ny fianakaviana iray manokana amin'ny alalan'ny fomba hafa, toy ny famerenana amin'ny laoniny ao anatin'io fianakaviana io amin'ny fotoana iray na amin'ny fahatongavana ho lasa fianakaviana mifanakaiky.
Ny tranga tena mahaliana iray mahakasika ny fanalan-jaza dia ny raharaha momba ny fanambadiana zanapeo Ian Stevenson Pertti Haikio | Samuel Helander. Taorian'ny nahafatesany tamin'izy dimy taona dia afaka nifandray tamin'ny rahavaviny, Marja, avy amin'ny tontolon'ny fanahy i Pertti. Maty i Marja ary nihevitra ny fanalan-jaza. Avy any amin'ny tontolon'ny fanahy i Pertti dia nilaza taminy fa tsy hanala zaza izy, satria te hiverina hiverina aminy indray izy. Vokatr'izany, nanohy ny fitondrana vohoka i Marja ary hita fa niteraka an'i Perti fony i Samuel zanany.
Ny mahaliana, ao amin'ny Felix Fresnel | Christophe Albrecht ny tranga vaovao momba ny fanambadiana, ny fampahalalam-baovao dia maneho fa ny fanahy dia mifamatotra mafy amin'ny foetus mandritra ny volana 3 volana vohoka.
Ny Fanahin'ny Fanahy na ny Torolàlana ho an'ny Fanahy amin'ny fandraisana anjara ao amin'ny vatana vaovao
Ao amin'ny tranga maro tsy miankina amin'ny firaisana vokatry ny firaisana, anisan'izany ny tranga nokarohin'i Ian Stevenson, MD, ny fandraisana andraikitra ara-panahy dia ny fanorenana na famahana ny tranga vaovao momba ny fanambadiana. Ny tranga indray vao teraka indray John B. Gordon Jeff Keene, John Elliotson | Norm Shealy ary Carroll Beckwith | Robert Snow dia ohatra tsara.
Ian Stevenson dia nitatitra fa ny "manambara nofinofy" dia matetika mitranga amin'ny tranga teraka ao amin'ny vatana vaovao, izay misy fanahy iray manambara na maminavina ny fahatongavany ho nofo amin'ny nofy, ampitaina amin'ireo izay ho sakaiza na fianakavian'ilay fanahy amin'ny fahatongavany ho nofo. Raha ny marina dia nanambara nofinofy tamin'ny 22 isan-jaton'ny Stevenson sahabo ho 1200 nanamarina ireo tantaram-pitadiavana fiainana taloha. Ny fanambarana ny nofy dia porofo koa fa ny fanahy dia mandahatra ny androm-piainany.
Ny ohatra iray hafa momba ny fanahy iray izay manomana ny fahatongavan'izy ireo manaraka dia mitarika ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana James Huston, Jr. | James Leininger. Tamin'ity tranga ity, nitatitra tamin'ny ray aman-dreniny i James Leininger fony mbola zazakely fa efa nijery azy ireo talohan'ny nahaterahany izy. Nilaza i Little James fa i Bruce sy Andrea, ray aman-dreniny, dia nanatri-maso azy ireo tao amin'ny hotely mozika tany Hawaii ary nanapa-kevitra fa ho ray aman-dreny tsara izy ireo. I Bruce sy Andrea dia nijanona tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Royal Hawaiian volana maromaro talohan'ny nahaterahan'i James. Tsy nisy niresaka tamin'i James kely momba ny ray aman-dreniny mijanona any Hawaii alohan'ny nahaterahany.
Ny firazanana amin'ny vatana vaovao, ny fitrandrahana Synchronistic ary ny fankalazana ny andro fahatsiarovana
Ny toetra iray hafa izay hita amin'ny fikarohana fanao taloha dia ny fisehoan-javatra sy ny famantarana ny synchronisme hita amin'izao vanim-potoana izao izay toa manatsara ny fifandraisana amin'ny fiainana taloha. Toa hita fa afaka mifandray amin'ny olombelona ny fanahy ary manamboatra ireo tranga toy izany. Na dia tsy mifototra amin'ny fisehoan-javatra toy izany aza ny fehin-kevitra hentitra, dia toa mitranga any amin'ny toe-jatony izy ireo.
Manintona ireo toerana misy anao manokana sy fahatsiarovana jeografika amin'ny tranga fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Matetika ny olona no ankafizin'ny olona amin'ny fiainany taloha. Amin'ny tranga maro, ny olona dia mijery ny maha-zava-dehibe ny toerana misy azy taloha. Ny olona dia afaka mipetraka any amin'ireny faritra ireny na mitsidika fialantsasatra taloha amin'ny fialantsasatra. Amin'ny toe-javatra sasany dia hita fa ny fanahin'ny olona dia tsy misy afa-tsy ny toe-tsaina mahazatra.
Amin'ny toe-javatra hafa dia mety hitarika ny olona any amin'ny toerana iray manokana ny fanahy mba hahatonga ny fahatsiarovana ny fiainana taloha na hanamorana ny fifohazana ara-panahy. Ny trangan'ny Robert Snow ary Jeffrey Keene dia asehoy ny fomba ahafahan'ny fitarihana any amin'ny toerana ara-jeografika ho any amin'ny fanambarana momba ny fiainana taloha.
Ankoatra izany, rehefa tonga any amin'ny toeram-ponenana velona ny olona, ​​dia mety hahatsiaro ny fomba hahitana toerana manokana, toy ny trano fonenana taloha. Ohatra, ao amin'ny Anne Frank | Barbro Karlen raharaha, tamin'ny faha-folo taonany, Barbro dia afaka nitondra ny ray aman-dreniny avy tao amin'ny hotely ho any an-trano Anne Frank tsy misy lalana, na dia mbola tsy tany Amsterdam akory aza izy talohan'izay.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha & fiverenan'ny fiainana taloha
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha dia mety hisy fiantraikany lalina eo amin'ilay olona niaina izany. Ny fahatsiarovana dia mety hitranga tampoka na amin'ny alalan'ny famerenana amin'ny fiainana taloha. Amin'ny fiverimberenan'ny fiainana taloha, ny mpitsabo iray dia mitarika ny olona ho amin'ny toeram-pitsaboana lalina. Ny lohahevitra dia voatosika hiverina hiverina tsindraindray mandra-pahafatin'ny traikefa teo aloha na tsaroany.
Ny fahatsiarovana ny fiainana teo aloha dia noraisina tamin'ny alàlan'ny fitarainana izay toa marina no hita tao amin'ny Carroll Beckwith | Robert Snow Snow, ary koa ny raharaha xenglossy maharesy lahatra Gretchen Gottlieb | Dolores Jay ary Jenson Jacoby | TE, izay nanaovan'i Ian Stevenson, MD fikarohana.
Raha tena misy ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao indray, ahoana no ahafahan'ny mponina ho lehibe kokoa ankehitriny noho ny tamin'ny lasa?
Ny fomba tsotra indrindra hiatrehana ity olana ity dia mifandraika amin'ny fahita matetika amin'ny fahatongavana ho nofo. Taloha, rehefa vitsy kokoa ny mponina eto an-tany, dia afaka mihalatsaka matetika kokoa ny fanahy. Raha ampahafolony ny isan'ny mponina raha ampitahaina amin'ny fotoana vao haingana, dia afaka mihalehibe impolo heny matetika ny fanahy.
Ohatra, tamin'ny vanim-potoana taloha, ny fanahy iray dia mety afaka nitafy nofo indray mandeha isaky ny 1000 taona, fa rehefa nitombo folo heny ny isan'ny mponina rehefa nandeha ny fotoana dia afaka nitafy nofo iray avy ny olona isaky ny 100 taona. Rehefa nitombo ny isan'ny mponina teto an-tany nandritra ny taonjato maro, dia nanana fotoana nanjary nofo matetika ny fanahy. Miaraka amin'ny isan'ny mponina ankehitriny, dia toa afaka miteraka nofo tsy miova ny fanahy. Ao amin'ny Ian Stevenson, MD tranga taloha nisy fiainana Suzanne Ghanem (sary mankany ankavanana) ary Daniel Jurdi, teraka indray tao amin'ny herintaona ny vatana vaovao.
Fomba iray hafa hanazavana ny fitomboan'ny isan'ny mponina eto an-tany niparitaka, izay ahafahan'ny fanahy iray miaina vatana olombelona mihoatra ny iray amin'ny fotoana iray.
Fanazavana amin'ny antsipiriany kokoa momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny fitomboan'ny isam-batan'olona no omena ao amin'ny bokiko: Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana
Fehiny momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny fahazoana ny fiainana taloha
Amin'izao fotoana izao, manomboka amin'ny androm-piainany ka hatramin'izao, ny olona dia toa manana endri-javatra mitovy, endrika toetra, talenta ary na dia ny teny fanoratana fiteny aza. Ny fomba iray hieritreretana momba ny vatana vaovao indray dia ny misaintsaina ny fizotran'ny torimaso amin'ny alina ary mifoha maraina.
Tahaka ny nifoha tamin'ny torimasom-pahoriana tahaka ny iray tamin'io alina io ihany, mieritreritra ny fahafatesana sy ny vatana vaovao indray amin'ny fomba mitovy. Maty isika ary mifoha amin'ny fiainana iray manaraka tahaka ilay olona iray ihany. Mifanohitra amin'ny fifohazana amin'ny torimaso, amin'ny vatana vaovao indray, dia tsy tsaroantsika hoe iza isika no alina talohan'izay.
Ary koa, amin'ny firaisana amin'ny vatana vaovao, dia afaka mifoha any amin'ny firenena samihafa sy eo amin'ny fianakaviana manana foko sy fivavahana hafa noho ny teo aloha. Azontsika atao ihany koa ny mifoha amin'ny sokajin'olona sy ny fifaninanana. Ireo trangan-javatra sy tombontsoa azontsika omena ny fiantraikan'ny lalan'ny fiainantsika.
Araka ny nomarihina etsy ambony, porofoin'ny porofo momba ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao fa ny fanahy dia mamolavola aina, anisan'izany ireo fianakaviana naterany. Noho izany, ny fanovana ny zom-pirenena, ny finoana, ny firazanana, ny lahy sy ny vavy ary ny fiaviana ara-poko dia fanapahan-kevitra mahatsiaro, natao hanatsarana ny traikefa sy ny fivoaran'ny fanahy. Amin'ny ankapobeny dia hita fa ny fivoarana, ny fivoaran'ny fanahy, dia mitranga rehefa miaina amin'ny maha-olombelona isika, mandra-pahatongantsika amin'ny toe-javatra izay ahafahantsika mianatra avy any an-tsekoly eto an-tany ary afaka manatsara ny fandrosoan'ny fiaramanidina.
Ny fiheverana fa ny fivavahana, ny zom-pirenena, ny foko sy ny foko dia afaka miova avy amin'ny fampodiana ho an'ny iray hafa dia tena zava-dehibe amin'ny fomba fijery ny fiarahamonina. Satria ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy, ny porofon'ny fiorenan'ny vovoka indray dia afaka manampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa, araka ny fahafantarantsika fa isika rehetra dia fanahy manerantany avokoa. Rehefa mahita ny tenantsika ho fanahy manerantany isika, rehefa takatsika fa isika rehetra dia mpirahalahy sy rahavavy izay miara-miara-miaina mandritra ny androm-piainany eto an-tany dia tsy hisy afa-tsy fiadanana eto an-tany.
James Huston, Jr. | Ny raharaha raindahiny James Leininger